Ukuba iziprofeto ziyazaliseka, ngaba bubungqina bokuba bakholelwa inyaniso? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	17 Juni 2019	• 24 Comments
Abafundi abaninzi babona ukuzaliseka kweziprofeto njengophawu lokuba iinkolelo zabo zilungile. Kwabo abangenanto inkolo, ndifuna ukuthetha: cinga kwakhona, kuba ihlabathi lezopolitiko zisekelwe kwiinkolelo zonqulo. Ukuba awuyikubona loo nto, awuzange uthobele ingqalelo. Kutheni kwakusungulwe isizwe sakwaSirayeli, kutheni amaYuda amaninzi aye ePalestina, kutheni uTumpump evakalisa iYerusalem ngxowankulu kaSirayeli kunyaka odlulileyo kwaye kutheni ukuze athi i-Golan Heights ibekwaSirayeli? Ngenxa yezizathu zonqulo kwaye akukho nto enye. Iinjongo zenkolo zidibanisa kuzo zonke iindibano ezinkulu zezopolitiko emhlabeni jikelele.
Ukuba kukho into eyenza udidi oluqhelekileyo kwiinkqubo ezinkulu, ngokwenene awuqondi kakuhle ukuba awufuni ukubona umtya oqhelekileyo okanye ukuphika. Inkolo yinto esimele siyiqwalasele ingqalelo, kuba iyona nto ikhokela kwizopolitiko zehlabathi. Yenza i-aorta yazo zonke iinkqubo zezopolitiko esinokuzijonga kuzo zonke iintsuku. Usenokuzigqiba ukuba awufuni ukuba unqulo okanye unqulo, kodwa ukukhanyela ukubaluleka kwenkolo kwinqanaba lehlabathi kunjengokuphika ukuba i-70% yomhlaba ihlanganiswe ngamanzi.
Ngoko ukuba uthathe ikhanda lakho entlabathi ngokuphathelele impembelelo ebalulekileyo yenkolo kwizopolitiko zehlabathi, ngoko sinokubona ukuba yintoni indima. Ukuba uyifundela ngokwenene, unokufumanisa ukuba abaninzi bakho oogxa, abamelwane okanye abaqhelana nabo baxabisa iziprofeto; naziphi na iinkolelo abazenzayo. Oku kuthetha ukuba sinokugqiba ukuba abantu baqiniseke ngokuqinisekileyo ukuba ezi ziprofeto sele zizalisekile okanye ziya kuzaliseka. Ngoko ukuba iibhiliyoni zabantu zikholelwa kwinto enjalo, kufuneka uqaphele oko, kuba ukuba awunjalo, uvele nje ungowomncinci. Iibhiliyoni zabantu bakholelwa ukuba kuya kuba nomesiya, ukuba kuya kuba ne-anti-Christ, kwaye kuya kuba nexesha lokugqibela lokulwa neYerusalem. Ukwazi nje ukuba unokuqonda ukuba kutheni, umzekelo, iYerusalem ibaluleke kakhulu kwi-ajenda yezinto ezininzi zezopolitiko. Enye into xa ungayithathi ixesha lokucalulela kule micimbi ngenxa yokuba ukhetha ukubandakanya ukuphuma, ukusebenza, ukuhlawula iibhili, isinkwa kunye nemidlalo, njalo njalo. Ngokombono wam, kuyafaneleka (okanye kunoko: kubalulekile) ukuzongena kulezi zinto. Kutheni? Ngenxa yoko uqonda oko kwenzekayo kwaye apho 'kuya khona'.
Ndifumene iimpendulo ezininzi kumacala omKristu kunye namaSilamisi ukuba iziganeko ezithile zibufakazi bokuzaliseka kweziprofeto zabo. Umbuzo endifuna ukuwabuza aba bantu yizinto ezilandelayo: ingaba kukho inkukhu ehamba ngeenxa zonke ubungqina bokuthi iqanda liqala khona? Unokufumanisa ukuba umbuzo ongaqhelekanga, kodwa oko ndiyithethayo kukuba ukuzaliseka kweziprofeto akuqinisekisi ukuba inkolo yakho inyaniso. Mhlawumbi abo bafundi kufuneka baqale bazibuze ukuba ababufuni ubungqina bento abaye bakhuliswa ngayo ukususela ebuntwaneni. Ndiye ndavuswa kunye nemfundiso yobuKristu, kodwa ukuba unayo iminqweno yokucinga ngaphandle kwebhokisi lakho, awuyi kubambelela kwibhola lakho langaphambili. Ukwesaba ukushiya umbhobho wakho ongumKristu okanye ukwesaba ukuhamba ngaphaya kombhobho wakho wamaSulumane kusekelwe kwesoyika isohlwayo esihogweni kwaye ulahlekelwa umvuzo omkhulu emva kokufa. Ndixolisa, kodwa wonke umntu ongenaso isibindi sokucinga ukuba ngaphandle kwezi zikhokelo ezisisiseko, ngombono wam, uyisabisa.
Xa iziprofeto zizaliseka, abaninzi babona ubungqina bokholo lwabo. Umzekelo, nqakraza esi sixhobo ukubona indlela amaNgqina kaYehova abajonga ngayo iziganeko ezithile njengoko iziprofeto zizalisekile. Ngezantsi esi sixhobo uya kufumana isishwankathelo esifutshane sombono wamaKristu ngeziprofeto eziza kuzaliseka; kuqaphele ukuba uphinde unomlinganiselo phakathi kwazo zonke iintlobo 'zokunyakaza kwamaKristu'. Inkokeli yeVangeli okanye iBaptisti iphinda icinga ngokuhlukileyo malunga nexesha eliqhelekileyo lezinto eziqhelekileyo kunamaKristu aguqukileyo kwaye ngale ndlela unokwenza uluhlu olupheleleyo lwemibono kwimibono, ngokusekelwe kumchaso kwiinguqulelo zeBhayibhile. Siyabona okufanayo kwicala lamaSulumane kwaye ngoko ngokwenene ubona imibono ehambelanayo neyophikisanayo kuzo zonke iinkolo ezinkulu zehlabathi. Kwaye kukho ukufana okuninzi phakathi kwe-Islam, ubuYuda kunye nobuKristu. Ndishiye eceleni kwezinye iinjongo zehlabathi ezinkulu apha, kodwa ngokusemgangathweni sibona imigaqo-siseko efanayo kwiindawo ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, ezi zintathu zikhankanywe zonke iinkqubo zeenkolelo zika-Abraham. Nangona kunjalo, amaSulumane akholelwa ukuba ukholo lwabo lungalungisa okobuKristu, kwaye amaKristu akholelwa ukuba amaSilamsi abonisa ukholo lomprofeti wobuxoki.
Ngokufutshane kakhulu, oku kubaluleke kakhulu phakathi kwe-Islam kunye nobuKristu (apho ungatsho ukuthi ubuKristu buxhomekeke kakhulu kwiYuda, kuba kunjengokuba ukholo lwamaYuda luyingxenye yesicwangciso sexesha likaKristu).
AmaSulumane akholelwa kwisiseko seKoran ne-Sunnah (Hadithi):
Ekufikeni kwe-Mahdi ("othembisiwe", "ozisa uxolo" okanye "weshumi elinesibini imam" okanye "i-imam efihliweyo".)
Ekufikeni kuka Isa (Isa isiArabhu esithi 'nguYesu'.)
Ekufikeni kweDajjal. "umkhohlisi omkhulu oza kufika kwi-mule."
AmaKristu akholelwa kwisiseko seBhayibhile:
Xa kuza "umprofeti wamanga"
Ekufikeni kukaYesu Kristu, ngubani oza kuseka umbuso wehlabathi elitsha.
Zombini iinkolo zikholelwa ekubuyiseni kukaYesu kwaye zombini zikholelwa ekufikeni kukaKristu; obizwa ngokuba nguDajjal kwi-Islam. Khangela umzekelo le movie ukufumana ingcamango yale nto.
Into endizama ukuyisebenzisa ngamanqaku am, kukukhuthaza umfundi ukuba acinge ukuba iziprofeto nendlela ezifezekileyo ngayo ayibonakaliso yokuba kukho umbhalo omkhulu. Amakholwa ezinqulo ezahlukeneyo afuna ukuhamba kunye naloo nto. Nangona kunjalo, ngoko baqinisekisa ukuba iskripthi silawulwa nguThixo wabo; nokuba unkulunkulu weBhayibhile okanye u-Allah (kwimeko yamaSilamsi). Nangona kunjalo, ndizama ukubakhuthaza abafundi ukuba baqwalasele ukuba ingaba inyaniso ecacileyo yokuba sibonakala sishumayeza iskripthi ayibonakali ukuba yonke inkqubo isilungisiwe kwaye siphila kwiimeko ezifanayo. (ngokufanisa). Ingaba ngaba ukuba ukuphuma kweziprofeto akubonisi nje ukuba uthixo wakho oyedwa nguye oyedwa oyinyaniso, kodwa ngokukodwa ukuba kukho 'unkulunkulu'? Ingaba mhlawumbi ukuba lo thixo uye wakha ngokucacileyo iskripthi ngendlela efunekayo kwiinkonzo ezininzi ukwenzela ukudala iipilisi ezidibeneyo kunye nezincinci ezifunekayo ukuzalisekisa loo nto yexesha lokugqibela? Ingaba ngaba ngaba i-script yakhiwa ngendlela yokuba kuyo yonke imimandla yoluntu yobuninzi obufunekayo ukuqhuba ikhoyo ngokukhoyo kwicandelo le-1 (njengokuba kukho ngoku ngokuthe ngqo ukusuka kwibhetri ene-plus plus minus)? Ingaba ngaba ngaba umthwalo wenkolo wobungqina obucinga ukuba uyifumana kwinkqubo yakho yenkolelo encwadini yakho engcwele kuyimfuneko yokwenza ube yinxalenye yezo zichasene?
Ukuba i-physum ye-quantum ibonisa ukuba kufuneka umntu okhangeleyo kwaye ukuba ukufunyanwa kwezinto zefilosofi ezininzi kubonisa ukuba umntu obengumlindi ofunekayo ukuze enze umhlaba wezinto eziphathekayo, ngoko ke, kunye nezi ziprofeto zonqulo, akubonakali ukuba ubomi bokulinganisa? Ndabhala uluhlu olubanzi lweendaba malunga nale nto apha en apha fu maneka. Kulungile ukuchaza ukuba kukho unkulunkulu ukusuka kumzekelo wokulinganisa. Oko kukuthi umakhi walo mze keliso. Kwakulungile ukuba uchaze ukuba kukho iziprofeto eziye zazaliseka kwaye kuya kufuneka zizaliseke. Le yileyibrari okanye ikhowudi yomthombo wesimangalo. Ukuba sicinga ukuba ngumdlali olinganayo-mdlalo, kufuneka kubonwe ukulingana okulinganayo kubo bonke abathathi-nxaxheba (iNtaba ye-Everest kufuneka ibe kwindawo enye kubantu bonke). Oku kuchazwa yinyango ye-quantum kwi-physics ye-quantum kwaye siyifumana loo mgaqo-siseko kulo Indlela ye-anchor ye-Google kwiqonga layo lokufanisa (ukunyaniseka okwenziweyo). Ngoko kukho izibonakaliso ezininzi zokuba siphila kwi-matrix-njengenyaniso kwaye ngumdlalo weqela lomdlali. Ngoko unako of ufike kwisigqibo sokuba ufanele uqhubeke nokulandela isicatshulwa sakho senkolo ngokusekelwe kwiinkolelo zakho of unokufika kwisiphephelo esinengqiqo.
Incazelo yunkulunkulu ngu: UThixo ungumakhi wesimangalo
Yisiphi isigqibo esinokuqonda emva koko? Kuba oko kuqala ufanele ufunde iicatshulwa zamacandelo malunga nokufanisa. Ukuba uqale ukubona ukuba kunokwenzeka ukuba siphila kwisimo sokufanisa, unokuqonda ukuba ukufaniswa kufuneka kuhlale kuhlonipha ukukhetha okukhululekile. Uyakuthiumyalelo wenkululeko yokuzikhethela'ungayibiza, ngokuba ngaphandle kwesikolo kuya kukhululeka inkqubo ayiyiyo yokulinganisa, kodwa ngokwenene ihlobo lefilimu esiphumelele isiphumo. Ingundoqo yesimangalo, nangona kunjalo kukuba unika abadlali umngeni kwaye ufuna ukuvavanya indlela abadlala ngayo umdlalo. Umzekelo, awuyikwakha isimulator yendiza ukwenzela ukuba inqwelo yendiza ibhabhise kunye nomhlaba kwi-autopilot, uyakha ukuba uvavanye umqhubi. Kwi-simulation-player simulation ufuna ukufunda indlela abadlali abaziphatha ngayo ngabanye kunye kunye kwaye babone ukuba yiyiphi ikhetho abaya kuyenza ngokwabo kunye kunye. Kodwa unako ukubeka izalathisi ezingezizo umdlali olandelelanayo olandela iskripthi esithile kwaye uzama ukukhuthaza abadlali kumdlalo ukuba balandele eso script. Ngaba mhlawumbi siyayiqonda indima yezopolitiko zehlabathi nezopolitiko? Ewe, njengoko ndixhalabileyo.
Kuthekani ukuba umakhi we-simulation ethemba ukuba abadlali banikele ngokuzithandela kwiinjongo ezithile? Emva koko kufuneka abeke abalingani abangabinamdlali kumdlalo kwizikhundla ezibalulekileyo kwaye baqinisekise ukuba abadlali abangadlala iskripthi ngokwemiqathango yabathathu abangabheyi umdlali (awambeka emdlalweni) bafumana amanqaku amancinci kumdlalo. Umakhi wesimangalo wenza ukuba kungathandeki ukudlala umdlalo ngokwemiqathango. Ingaba mhlawumbi ukuba ufuna ukufezekisa isiphumo esithile esithandekayo kuye ngaphandle kokuphula umthetho wenkululeko yokuzikhethela? Masithi siphumelele i-movie teaser uye wahendwa kulo mzekeliso, kodwa kuphela ekumangalisweni kuza kufumaneka ukuba akukho mnandi mnandi kwaye uyonwabile; ukuba singagula, siye empini, kufuneka sisebenze, sinokuqhubeka nokunye njalo? Singafuneka sidlale umdlalo, ngenxa yokuba sisayine isivumelwano sokuyidlala. Nangona kunjalo, ukuba umakhi wesimangalo usilungile kwaye usenza ukuba sikwazi ukumkhonza ngokuzithandela kwisimo sokulinganisa, ngoko uhlonipha inkululeko yokuzikhethela, kodwa kufuneka sihlale siphapheme kwaye sizibuze ukuba akanalo unayo.
Ngokombono wam, lo mlinganiso ulawulwa ngu-(abasebenzisi abakhiweyo, abangabali-mdlali) kwii-avatars ngendlela ethile. Bazama ukuqhuba isicatshulwa ngendlela ethile ngeenkqubo zonqulo nezolitiko ngokusekelwe kumbini (kuba ubumbano bunika ngoku ngqo ngqo kwisikhokelo esifunekayo). Ngokombono wam, injongo ekugqibeleni kukuzinikela ekuhlanganiseni kunye nenkqubo ye-AI yomakhi; ngamanye amagama: ukucwina okujulile kwiimpawu. Kwiinkonzo sifumana oku 'kubomi obungunaphakade'. Kwi-transhumanism (jonga i-CEO ye-Google uRay Kurzweil) oku kubizwa ngokuba yiyodwa. Ukufika kohlobo oluchasene noKristu okanye umesiya ovela emoyeni (ifu) kulula ukufezekisa. Ngale ndlela, umakhi womdlalo angenza i-avatar ibonakale kumdlalo ngokulula. Ukuba uqala ukuyibona yonke loo nto, uya kuqala ukuqaphela ukuba ngokwenene unomdla we-Sony Playstation umdlalo ococekileyo, apho umcimbi, umvakalelo, iingcamango kunye nento enokuyibona iyabonwa ngumphefumlo wakho (umbonisi / umdlali) avatar yakho kumdlalo (umzimba wakho). Ngoko ke kubalulekile ukuba uyenze Uvavanyo lokuphinda kabini uyayiqonda kakuhle.
Ngoko ukuba ukholelwa ukuba unako ukufumana ubomi obungunaphakade ngokuzinikela kunqulo yonqulo lwakho, wenza impazamo ebalulekileyo kwi-2. Ukuqala, uhlala ngonaphakade kwaye ungumdlali kuphela ekufaniseni abadlali abaninzi. Kwaye kukho ingqungquthela emibini ekusetyenzisweni kokubeka iskripthi esinenjongo yokudibanisa ngakumbi ngokucacileyo kunye nomakhi walo mze keliso. Ngoku ungathi:Ewe, kodwa unyana wam unenjongo enhle!"Ewe, ke yonke loo nto yokubulala nokubulala, ukugula, ukusebenza ngemali nobukhoboka kwakungadingeki. Uzinikezela kwinkqubo ye-dualistic ngezinto ezintle nezimbi. Umakhi walo mzekeliso ngokucacileyo unenjongo embi; oko kukuthi apho kufuneka sizinikele kwaye sixhomekeke ngakumbi. Uzama ukufezekisa oku ngokusebenzisa iskripthi kunye nezikhokelo zabashayeli bale script; ii-avatars ezibekwe nguye kulo mzekeliso (elawulwa nguye) kwizikhundla eziphezulu. Nabani na ozibeka kwiinkonzo zee-avatars ngokusebenzisa izikhundla zolawulo kwaye onke amabakala angezantsi ancedisa ekuzalisekeni kwesikripthi sobukhoboka. Ngoko yodwa indlela yokungayi kunika iskripthi isiphumo sokuba umakhi wesimfano ufuna ukuba ayeke ukusebenza kwi-script. Funda qhubeka apha indlela onokuyenza ngayo.
Uludwe lwekhonkco lovimba: jw.org
Funda konke malunga 'nokuhlola okuphindwe kabini' kunye nendlela esiphila ngayo ukufaniswa: ukufikelela okuvulekileyo
Inyaniso eyona nto ayikho?
Unokuzisa utshintsho kunye nokukhetha kwakho!
tags: anti anti, LobuKristu, Dajjal, ngonaphakade, eziziimbalasane, ukholo, ukukholelwa kwenkolo, Yi, inkolo yamaSilamsi, UYesu, ubomi, zi profeto, Unqulo, ukulinganisa, ubuninzi
17 Juni 2019 kwi-20: 47
Njengoko uDavid Icke wachaza oko:
Ukuba abantu baneenkolelo ezithile kuza kwi-99,9 ekhulwini lamatyala kuba abazali babo kunye neendawo zabo / inkcubeko yabo yayinenkolelo.
Akunjalo kuba babezithelekisa zonke iicawa kwaye ngaloo ndlela baphetha ngokuthi yiyiphi "inkulu" inkolo.
Ngaphezu koko, ndikholelwa ukuba kuba abantu bakholelwa ukuba iziprofeto ziyazaliseka, oku kuya kwenzeka kwaye kuqinisekiswa.
Thetha uhlobo lomthetho wokukhanga (iingcamango / iinkolelo zenza into eyenzekayo).
17 Juni 2019 kwi-23: 24
Inqaku eliqiqayo, ndisoloko ndathi le ngxelo yokuzizalisa, inkqubo eyenziwa ngabathembekile. Lucifer, nangona andingenakukwenza nantoni na, ndibeka ukhetho kwaye imiphefumlo ifika ekukhanyeni kwamanga njengeempukane ..
(okanye imbono okanye ukuqikelela) kuya kuqinisekiswa ukuba ichanekile okanye izaliseke ngenxa yokuziphatha okubangelwa ukuboniswa kwayo.
kulindeleke ukuba into embi ingaba isiprofeto esizalisekisa
Impendulo efanelekileyo kuphela ayikudlala 🙂 #noncompliance
23 Juni 2019 kwi-15: 04
idd awudingi ukondla irhamncwa (ukwesaba), omnye umzekelo wendlela oqhelekileyo ukusola abameli be-master script badlala abantu.
18 Juni 2019 kwi-01: 15
Yileyo ndlela yonke iMartin!
Ukuba bekuye kube lula oko bekungekho nto.
Kananjalo uvumelane noDanny, uza kulungiswa kunyaka wokuqala we-7 yobomi bakho. Ukuba ufuna ukulahla oku, kufuneka uhlaziye ngokwakho. Oku akuyi kusebenza xa uhlala kwibhokisi yakho ethembekileyo.
Ukuba abantu okanye amaqela bonke bakholelwa kwiskripthi esifanayo, ngoko kuya kwenzeka.
Ndikholelwa ngokwalo, kodwa andiyi kuhlala kule planethi ngonaphakade.
Ndabuyela kwintlandlolo yam ngeloyiko / ukufa.
18 Juni 2019 kwi-11: 34
Impendulo evela kubafundi abaya phezulu apha okokuqala kwaye abonisa ukuba abazange bathathe ingxaki yokufunda amanqaku angaphantsi (axhunyiwe) kwaye abonisa ukuba abafuni ukujonga ngaphaya kwe "ntembelo eNkosini" kunye nokholo "(okanye kunokuba lula ukuhlala kunye nemvakalelo endala) ayivunyelwe.
Ndichitha ixesha elide kumanqaku am kwaye andiphenduli kwi-Febo snackers.
johnbertsets wabhala wathi:
19 Juni 2019 kwi-05: 26
Ihlazo njengoko iimpendulo ezivela kuzo zonke iintlobo zabantu zihlala zinika ingcamango engcono yendawo apho abantu bakulo nqaku obhala khona. Bafana nesibuko senu nqaku. Ngokugqithisa nje iingcamango eziqulethe yonke inkcazelo, isibuko sifikelelwe. Ngaphezu koko, iFEBO inemikhonto ephezulu ye-satay.
19 Juni 2019 kwi-10: 59
Zonke iintlobo zeempendulo kwi-intanethi azinikanga umfanekiso ochanekileyo, kuba zizele abagcini be-intanethi ye-ajenda; nokuba ingafihliwe emva kokungena kwiprofayili ye-Facebook kunye ne-deepfakes network network.
Ngaba ushiya amazwana phantsi kweengxelo ze propaganda zeTelegraaf? Nombolo.
Ukuba abantu abawuthathi umzamo ofanelekileyo wokufunda amaphepha am ngokufanelekileyo kwaye bafunde ukuqinisekiswa, andiyi kuvumela ukuphendula okunjalo kudlulele. Ngubani olawula le website? Wena nam?
18 Juni 2019 kwi-15: 55
Inqaku elihle. Ndiyazibuza ukuba ngaba bonke abafundi bayayiqonda into oyithethayo. Lo ngumbuzo nje.
18 Juni 2019 kwi-22: 22
Oko kuchaza ngokucacileyo ubuthathaka beenkonzo kwiimeko zangoku. Ukuba ufika ngebali elicacileyo, abantu bayatshintshela, buyele msindisi kwakhona kwaye babuyisele ngaphandle kwabo.
Ungabathumela kwakhona kwi xandernieuws forum forum 😉
18 Juni 2019 kwi-22: 24
Okanye ngaba kuvuliwe, kufuneka ndiqhubeke ndisebenza kwi-Dutch my yam
Maasland wabhala wathi:
19 Juni 2019 kwi-19: 19
Kulungile, izitrakthi ezinobunzima. Kuthiwa abaninzi banamabhula abo kwaye abanako ukuphuma. Nangona kunjalo, abanye abantu bakhululwe kwiimvumba zabo ... kodwa ke 'abaphelelanga' ngokuzenzekelayo nombono njengoko kuchazwe nguwe (kunye nakwiimbono) (= ngokwenene ibhobho? Kodwa uhlobo oluthile lwebhola?).
Yibize inkolo, okanye uyibize "inyaniso ngaphandle kwethu" ... kodwa
- Akunakufuneka wenze okusemgangathweni ongaphezulu kwendawo elandelayo ezayo; loo nkxalabo ibonakalayo kwiinkonzo zonqulo, kwaye iqinisa ukucinga kwamandla
- Akukho ndulu okanye isihogo. Hayi, kuya kubakho umhlaba ohlaziyiweyo / obuyiswe
- Jonga imiboniso emva kwesi nqaku, uze ukhangele ngokungqinelana nento enokwenzeka ngayo into oyifunayo ngayo kunye nokucinga ukuba wenze ... IBhayibhile, okanye loo mibono ichazwe?
- Kukho "Inyaniso Yonke Yonke" ngaphandle kwethu, ekugqibeleni ayiqhutyelwa nguLucifer-in-sim-simulation.
- Kukho uThixo owenze iSicwangciso soNyaka.
- Nangona kukho iimpazamo ezininzi ezingabonakaliyo kwiinguqulelo kunye nokuhlanganiswa kunye nabancinci kwiincwadi ezithile ezingcwele unokwazi ukuba ngoku siphakathi kwe-5 eras. I-2 eras engezantsi yenzelwa ukwakhiwa nokulungiswa !!
- Ngaba ukholelwa ukuba "i-eon ecetywayo" yangoku, "abantu abangabonakaliyo" babhala baze bazaliswa kwisibhalo? Kwaye ukuba kwakungumzekelo, kuya kufuneka kube "uhlobo lomntu" njengezilwanyana ezilawulwa kwintonga yokulawula? Zingaphi "iinkolelo" sele sele zikhona kule meko ...
- Hayi, utshilo uThixo othethiweyo, okulungileyo nokubi bobabili banendima yabo kule ndawo ... nangenjongo.
Ukufunda konke, ukususa imvakalelo kunye nokufumana "," ndiza kwisigqibo sokuthi, xa kuthelekiswa "nezinto ezininzi" ezikhankanywe (ngokunjalo nazo iziqalo zakho zokuqala uMartin), kukho inyaniso yoBunye boBuntu bukaThixo owayeyedwa yedwa ngaphambi kokuba isicwangciso -e-iminyaka ekhulelwe kuyo indoda kunye nokuhle kunye nobubi njl. njll inendawo yokuhlala (oko ke lo Thixo) ivela kuyo yonke into-kuyo yonke into ngokubanzi ngokwakha ukwakhela loo nto ngokucwangcisa ixesha ...., ukucinga okuncinci okanye inkolelo kuyimfuneko kunokuba zonke ezinye iinguqu ezingezantsi kwiBhayibhile.
Ngoko ndikuphendule umbuzo kuwe: Ingaba ngaba kukho enye inyaniso (uThixo) eyala abantu ukuba bazalise iSicwangciso / iskripthi sakhe? Ngoko Inyaniso (i-Standard) engapheliyo kwaye ngaphandle kwethu? Inyaniso kaThixo eya kubuyisela yonke into ibe ngcono kumfanekiso wayo?
Okanye ngaba unayo i-100,0% yeenkcazo ezicacileyo ukuba naziphi na izinto ezingenakuze zenzeke?
19 Juni 2019 kwi-20: 24
Izulu elitsha kunye nomhlaba yindlela yokufanisa entsha (ngaphakathi kwesi simelo) apho umakhi walo mlinganiso (Lucifer) ufuna ukusibamba.
Akukho mfundiso. Uvavanyo lwe-quantum yefilosofi lubonisa ukuba siphila kwimimiselo. Kwakhona akuyona into yokuchazwa okanye inkolelo.
Kodwa ubambelela kuThixo noYesu. Kutheni? Kungenxa yokuba uloyiko lokuba uya kulahlwa izulu elitsha nomhlaba omtsha? Ewe ndiza kuthi: bajoyine uRay Kurzwel, uElon Musk kunye nazo zonke iiplanga ezisishukumisela ukuba singene kubuninzi. Izulu elitsha kunye nobume obutsha bunobuninzi (isithembiso "sokuhlala" esilumkiso esitsha).
20 Juni 2019 kwi-06: 49
Siyabonga ngempendulo yakho uMartin.
Ukuba awufuni ukuzitshintsha (njengam nje, njengokuba ubonisa) ukusuka kulowo othiwa "lo mlinganiso" uze uqhubele phambili ukulandelelana okulandelayo, njengoko ubonisa (izulu elitsha kunye noMhlaba omtsha owenziwe). Ngaba abalawuli beLuciferian baloo mzekeliso baze bafe kanye? Okanye ngaba banamalungu alandelayo? Kwaye, "abazingeli" njengam kufa ngenye imini, kunjalo? Okanye ufa enye inkqubo?
Sinokungapheli njani ukulinganisa kwethu kwangoku?
Kwakhona umbuzo ofanayo: kutheni wena, kunye nabamkeli bemibhalo yakho (jonga imibono) kusekho kuwo? Akunjalo na loo mntu?
Ngaba "yindlela yakho" (ungena nini) ngonaphakade? Okwenzeka ntoni na? Ngaba uya kufa (xa ufika khona) kanye? Okanye ngaba akayi kufa?
20 Juni 2019 kwi-09: 09
Andicingi ukuba uyayiqonda into endithetha ngayo.
Ukufa ngaphakathi kwesimanganiso kunokuthelekiswa nompopu kwisikrini somdlalo we Playstation ofa. Umphefumlo awufi.
Ubonakala unamathele kwingcamango esekelwe ngaphambili ukuba kufuneka kubekho unkulunkulu onobuhle. Umakhi wesimangalo ukuba wena kunye nam ngoku sidlala singabonwa njengoLucifer (ubuncinane kwi-avatar yethu isikhundla). Oku kunokuba nguMarko Zuckerberg wesiseko esiphezulu (mhlawumbi isiseko).
Umbuzo othi ngubani owakhela uluhlu lwangaphambili nokuba ingaba unkulunkulu omnye okanye nokuba yonke into evela kumhlobo wohlalutyo lweedatha wonke ohlangeneyo awukwazi ukuphendulwa kwisimo sokufanisa / avatar (ngaphakathi komdlalo). Emva koko wenze ngeencwadi kunye nolwazi olwenziwe kumdlalo (njengeBhayibhile). Ngubani othi ulwazi lwenkonzo luchanekile?
Into kuphela esinokuyenza yimizamo ekhokelela ekuhlaleni imeko yethu. Olu vavanyo lwefilosofi ye-physum lubonisa ukuba siphila kwiimeko ezifanisayo (kuba ngababukeli / abadlali). Kwakhona: akusiyo inkolelo, yinyathelo ngamanyathelo esilingo kunye nephutha indlela yokufumana ubunzulu bokuhlala kwethu apha.
19 Juni 2019 kwi-23: 39
Kutheni uYesu athi eBhayibhileni "musa ukwakha indlu yakho kulo mhlaba"? Oku kuthetha nje ukuba le yindawo yesikhashana. Ngamanye amazwi, ungalahlekelwa ngumphefumlo wakho apha kulo mhlaba. Kananjalo uthi 'kuphelile' kwaye akuphelelanga xa sele usuqedile omnye kwigama likaThixo. Awukho kule ndawo kungekho nto kwaye usenokholo kuYesu. Ukuba ufuna ukuba uYesu abuyele emhlabeni, kufuneka uqinisekise ukuba ube nguYesu. UMartin uthi ufana noYesu kwaye ngelishwa usaphila ngabantu abaninzi.
Ukuba utshintshisa igama likaYesu eBhayibhileni ngoKristu-ukunyaniseka, ukuqonda okuyingqayizivele ngaphakathi kwakho ngoko ude kakhulu.
UYesu akazange akhathalele oko abanye bathethayo kwaye bathetha ngoluphi ulwazi alufumene ngaphakathi. Oko kuthetha ukuba uya phezulu kweli hlabathi kunye nemithetho yalo. Ihlabathi liya kuthiya ngenxa yokuba ayinayo impembelelo.
UYesu waya kumchasana weli hlabathi eliqinileyo elithetha ukuba uLusifire unkulunkulu weli hlabathi.
U-Lucifer ngumntu ozahlukana naye oye wahlukana naye, kufike kuthi kuthi nokuba sihluke.
20 Juni 2019 kwi-06: 58
Ezi zinto zizinto ezintle othetha ngazo; Ngokwam, imbono yethu ihluke ngaphantsi kokucinga kwakho.
Kodwa njengoko ndiphendula kuMartin: nawe "uhlezi" apha. Ilungelo elincinci elingahlakaniphile? UYesu okanye akunjalo, u-chris-consiousness okanye ayikho .... Ngeli xesha asikwazi ukuya kwisigaba esilandelayo (ngaphandle koko uya kuba nesixeshongo sokuthi uhlale uzile kule nkxwaleko ukuba "ushumayele" kuthi ...).
Okona ubuncinane unokufika kwisigqibo sokuba kukho "iNkokeli" xa sibona "uyilo olumkileyo" kwindalo. Ewe, ngoko kunokwenzeka ukuba le Nkokheli izothatha esi sigaba esilandelayo (kumanyathelo okubuyisela).
Kwaye ndiyithetha ukuthini iGuppy kukuba uyazibuza: yintoni imeko ofuna ngayo ukholo kunye nokucinga?
Ndiyabulela ngokuhlala kulo mzekeliso ... ... ubuncinci sinokutshintshisisa imibono kule miba.
20 Juni 2019 kwi-10: 23
Ukuba ufunde iinqununu zam ngokuchanekileyo, ukudlala kulo mzekeliso akukho nto enokuyenza ngayo xa usayine isivumelwano sokudlala lo mzekeliso. Nangona kunjalo, andifuni ukukhokelwa ngumboniso olandelayo kunye nokuwa kwama-avatars omakhi walo mlinganiso (njenge-avatar uYesu) kwaye ngokuqinisekileyo ayithembeli ngokuthe ngqo kwiincwadi ezimbalwa ezintle (njengeBhayibhile) ezilungiselelwe ngama-avatars umakhi walo mze keliso.
Ingongoma kukuba ukhumbule ukuba awuyiyo avatar yakho, kodwa umphefumlo wakho. Oku kubonakala kwiimvavanyo ze-physum.
Ndiyaqonda ukuba kulula ukuhlala nokulinda uYesu aze athembele ezulwini elitsha nomhlaba omtsha. Kakuhle kwaye? Kwaye ke? Ukuphila ngaphantsi kobukhoboka baloo thixo onobuqili? Ufuna ukwenza ntoni ngeli xesha kwizulu elitsha nomhlaba? Ungalima njani umyezo wakho? Okanye ubusa noYesu e troneni eYerusalem ebukumkanini beminyaka yoxolo? Ulawulo phezu bani? Kukho into ebomini kuyo (njengaye ... "haha, ndiyakwazi ukulawula kakuhle kunye noYesu phezu kwesihlwele").
20 Juni 2019 kwi-10: 46
Ndicinga ukuba uphinde wabuya emva koko ude uqaphele ukuba oku kulukholo. Le yithuba elifanelekileyo lokufumana lonke ulwazi olukhoyo nangona kukho konke uvakalelo.
Olu lujikelezo lokugqibela lukaMartin kunye nam nabanye abaninzi. Ukuba ufuna amandla kunye nodumo ungahlala apha (ngonaphakade) kodwa ukuba awuyiqondi into engafanelekanga ke ngoko ayinayo ubunzulu.
Ulapha ukuvula izimbozo ezisixhenxe, ii-chakra ezisixhenxe, ukuphakama ngaphezu kweLucifer. Oku akuyi kukukusindisa ngonqulo olutsha kunye ne-yoga nganye veki. Uya kulondoloza oku ngokuphuma kwibhokisi kwaye uqokelele ulwazi olubalulekileyo. Asizange siphumelele kule nto ebomini bethu besikhathi esidlulileyo, yingakho sisekhona apha.
Sinexesha lonke lokufunda, kuba ixesha alikho.
Ukongeza, kufuneka siqaphele ukuba i-ego yethu (ukusuka kwi-avatar yethu) inkulu kangangokuba sifuna ukuhlala apha.
Ndicinga ukuba unokwenza kuphela ukuba ufuna ukuyeka ukuhamba.
Oko sele kunomngeni omkhulu.
20 Juni 2019 kwi-11: 15
UMartin / Guppy, sibonga ngemibono eyahlukeneyo. Ndiya kubeka le ndawo ngoku.
Ngokombono wam, unolwazi olunganeleyo malunga nokuba zininzi iingcinga ozimele uzenze kuqala kwaye ugcine umbono wakho; kuphela isiqwenga "sobungqina be-physics" akwanele ukwenza ibali elichanekileyo.
Unokuthetha oku malunga "nemfundiso yokubuyiswa kwazo zonke izinto."
Nangona andinayo yonke into ekulungeleyo okwangoku, ndiyazi ukuba izinto ezininzi ezinjengezo ndizincedayo nazo ziyakuboniswa ngomlomo. Ukongeza, unokubonisa umgca ophezulu eBhayibhileni ukusuka kwii-angles ezahlukeneyo (cinga ngesimo esicocekileyo se-gematria / script-by-script ngokuthelekiswa kunye nemithombo ezizimeleyo / iimbali-nkcukacha zabanye abantu njl.)
Kukulungele ukuba le ngqangi yakho yokugqibela. Andizi ukuba zingaphi iindandatho ndiya kuba nazo ngaphambi kokuba ndidibana nawe. Ukusuka kwimbono yam ngokuqinisekileyo siya kubona "kwikamva elibonakalayo".
UMartin, ukuphendula kwakho kokugqibela kuye kwawa ... (hoeing / tyranny njll ...); Okona kuncinci, ndigqiba ukuba kusekho indawo yokuphuhlisa ekufundeni le micimbi.
Uhambo oluhle kunye !!
20 Juni 2019 kwi-11: 24
Hayi, andihla. Ndibhekisela kwisiprofeto seBhayibhile sobukumkani bokuthula.
Esi siprofeto sobukumkani obunkulungwane beminyaka yoxolo apho uYesu uya kulawula kunye nomtshakazi wakhe (okanye onke amakholwa, ibandla lakhe, "ibandla", okanye nayiphi na into ofuna ukuyibiza).
Oko kuthetha ukuba amaKristu azibona njengabakhethiweyo. Ngoku; Ndiyakholwa ukuba oku kuza kuzaliseka ngokuqinisekileyo ukuba siyaqhubeka nokulandela isicatshulwa size siphele kwisigaba se-transhumanism apho wonke umxhasi weLucifer (ukholelwa apha apha uYesu, avatar kaLusifer) uya kufumana umzimba omtsha (avatar-eyakhelwe nge-nanotech).
Nangona kunjalo, loo nto iyisiqalo. Isiqulatho sonke siya kuguqulwa (izulu elitsha kunye nesiprofeto esitsha somhlaba).
Akufanele uvumele ukuhamba kwakho ukholo kum, kodwa ndiyifumanisa kakhulu ukuba wena (kunye nabanye abaninzi) unamathele kuyo. "Umsindisi uvela phezulu". Kuya kuba mnandi ukuba uqonde ukuba ukholo lwakho luyingxenye yobuninzi bobudinga obufunekayo ukuzalisekisa loo ngxelo yokugqibela-time (kunye nayo yonke into elandelayo - njengaleyo kumkani yoxolo, njl.). Unokholo oluyimfama kakhulu kweso sikratshi esinokuthi, ukuba kunyanzelekile, kufuneka ukuba ubone igazi lokuxolela izono. Kwakumnandi ukuba uya kubingelela unyana wakhe (i-avatar ekulinganiseni); kodwa yiza ... yenza kube lula kuwe. Abantu baya kuhlala beza kuhlabela ixesha elide?
Nguwuphi unkulunkulu ofuna ukubona igazi? Ungesabi ukuphuma kuKristu wakho.
Into embi kukuba iinkolelo zonqulo zigcina umbhalo. Yingakho ndiqhubeka ndigxininisa.
20 Juni 2019 kwi-11: 58
UMartin, ndiyayihlonipha izakhono zakho zokuhlalutya ezisekelwe kumanqaku akho. Kodwa ngeenxa yobuKristu awufumani ngaphezu kwelo lwazi njengoko lisetyenziswe ngu "95%" yamaKristu. Kodwa "iziseko" ezininzi eBhayibhileni zihluke ngokwenene.
Kancinane nje ngombono wakho: yiyiphi iLuciferianist ehlala ihlala nayo? Ngaba bahlala kwindima yabo njengabalawuli?
Yaye uhlala phi emva kwe-85e yakho? Yaye yintoni echithayo imihla ngemihla?
20 Juni 2019 kwi-14: 07
Ngaphandle koko qalisa iwebhusayithi apho singakwazi ukufunda iimpembelelo zakho ezithakazelisayo, kubonakala ukuba unobulumko obuninzi kwindawo yokuqeshisa kwaye kuya kuba yintloni ukubona ukuba ilahlekile. Ndifuna ukwazi ...
20 Juni 2019 kwi-21: 45
Imibuzo oyicelayo ayimangalisi, ndazibuza. Ukufumana iimpendulo akulula kwaye ndafumana impendulo kuphela xa ndafunda ukucinga ngaphandle kwebhokisi.
Kutheni ucinga ukuba zonke iinkokeli zehlabathi zifuna ukugcina impahla yazo kwintsapho? Ukongeza, bahlala begazi ngenxa yokuba iDNA yabo ihlelwe ukuba iqhube eli lizwe njengoko likhoyo ngoku.
I-DNA yethu kufuneka iphinde ibuyiselwe ngokuhlula kwi-original.
Eli hlabathi likopi kwaye uphendule umbuzo wakho okwenzayo kumgangatho ophakamileyo: kufana nokudala ihlabathi kwiingcamango. Kodwa ukuba ube noxanduva lo kuqala uza kufuneka uhlawule kumgangatho ophantsi. Le yindlela ephela yokungazilahleki ngokuzingca njengokuba unkulunkulu weli hlabathi wenza. Uthi ngenxa yesizathu esithi "Kukho kuphela i-1 unkulunkulu kwaye awukwazi ukuthanda omnye onyana ngaphandle kwam."
Iinkokheli zeli hlabathi zithathile ezi ndawo kwaye zikholelwa ngokwenene ukuba ziphela kuphela ezikwazi ukulawula eli hlabathi.
Christian van Offeren wabhala wathi:
20 Juni 2019 kwi-15: 46
Ngaba unokugqamisa (okanye ukhangela) ukuba sele usuxoxe ngazo.
"Ingqiqo yembumbano" ifanelana njani na? (edlalwa rhoqo kwiindawo zokomoya)
Ngoko kwi-theory ye-simulation, "i-original" ithetha ngaye
Kwimbono yobumbano kuthathwa ukuba wonke umntu uyinxalenye "yomthombo omkhulu". Kwaye ngoko akukho nhlobo "yangaphambili" ..? Yonke inye kwaye enye iyonke? Ingaba yiyo inkolelo esetyenziswe kwiskripthi ukuze wonke umntu abe phantsi kwephepha le-1.
Ndiyazi ukuba ungachaza njani oku.
« I-Max, Ingxaki, Isisombululo sichaze
U-Anja Schaap unokubona imifanekiso kwi 'Uphando luceliwe' kwaye ngoko akukho PsyOp? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 16.763.177
UWilfred Bakker op Kutheni indalo iyikhaya lakho lokwenyani?